बुद्ध चित्तको खेतीले बनायो करोडपति, एउटै बोटबाट एक करोड ! [भिडिओ] – Khabaarpati
December 28, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on बुद्ध चित्तको खेतीले बनायो करोडपति, एउटै बोटबाट एक करोड ! [भिडिओ]
बुद्ध चित्तको एक सय आठ दानाको माला बनाइन्छ । यस्तो माला कम्तिमा १३ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने अनुभव लामाले हामीसँग साझा गरे । बुद्ध चित्तको खेती कसरी गर्ने ? यो कस्तो भूगोलमा हुन्छ ? लगानी, घाटा, नाफा, बजार कस्तो छ ? लगायतका जिज्ञासा मेट्न कृषककै गाउँठाउँमा पुगेर तयार पारिएको भिडिओ अन्तर्वार्ता पूरा हेर्नुहोला । भिडिओः
May 7, 2021 goodmam